Navoaka ny logo eo an-toerana | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulNambara ny sarin'ny fiara eo an-toerana
06 / 01 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Highway, Headline, Faritra Marmara, fiara, TORKIA
Miseho ny famantarana ny fiara an-trano
Ny filoha Recep Tayyip Erdoğan dia nilaza fa ny lisitry ny fiara eo an-toerana dia ny "tulip ında ao amin'ny D D sy ny Special Special" amin'ny fandaharana iraisana miaraka amin'i Kanal D, CNN Türk.
Tiorkia Erdogan nangataka hanombanana ny fomba ny fiara, "Ny voalohany dia nitondra namana famolavolana izany, famolavolana io tena nanome ahy fanampiny fientanentanana. Efa nanipy vehivavy 5 miaraka amin'ity fepetra ity izahay. Mpandraharaha manan-danja ihany koa eto amin'ny firenentsika ireo Toy izany no zava-misy. Tsy hitranga izany raha mitsangana ary mamotika ny olona iray. Talohan'izay, niresaka tamin'ny sasantsasany amin'ireo mpandraharaha ato amin'ny sehatra izahay fa tsy afaka nahazo valiny. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia niditra tamin'ny tranom-barotra 5 ireto Tamin'ny dingana natao, dia namanay izay nanaporofo ny tenany any ivelany ny sakaizantsika, izay eo amin'ny toeran'ny CEO. Hainy koa ny lohahevitra. Izahay no nanao an'io dingana io. ”
Tiorkia Erdogan dia nanazava fa ny fiara manana endrika samy hafa 5, amin'izao fotoana izao endrika fahatelo nivoaka, dia nilaza fa be ny fiara ny loko manga antitra tsara tarehy.
Erdogan, naneho fa ny fampiononana sy fampiononana anaty anaty fiara, "Afaka mipetraka milamina aho na dia eo aza ny haavoko," hoy izy.
Nanontany raha nanao hafainganam-pandeha ny fiara, hoy i Erdogan: “Ny halehiben'ny haingam-pandeha dia mety manalavitra. Toerana tena tsara. Antenaiko fa handray ny fanadinana bebe kokoa izy ireo amin'ny faran'ny taona ity, fa 2022 izao vao ho vita. Mandritra izany fotoana izany dia manantena aho fa ho vitanay ny orinasa any Gemlik. Ankehitriny izahay dia nahita ny orinasa na zavatra. Efa natolotra azy isika. Maherin'ny iray tapitrisa metatra toradroa. Manome toerana eo amoron-dranomasina izahay ao Gemlikte. Satria tsy azonao atao ny mijanona maharitra aorian'ny tsy firaharahan'ny mpanondrana ity toerana ity. Hatao ainga-hanondrana izy io. Tsy tokony ho ao anatiny ve izany? Mazava ho azy fa, fa raha tsara ny fotodrafitrasan'ny fanondranana dia mety ho voavonjy izy ireo ary hanana toerana ny tsenan'izao tontolo izao ankehitriny. ”
Ny vidin'ny Tiorkia Cars
Ny Filoha Erdogan ny Torkia ny fanontaniana ny zavatra mitranga ny vidin'ny fiara, "Mino aho fa ny olona dia ho any amin'ny fiara afaka finday hevitra ny fahasorenana tsy fametrahana mora loatra, manantena aho, mihevitra aho fa. Raha tsy misy izany dia tsy mandeha ny filozofia hoe fandresena avy amin'ny dikan-teny. Zava-dehibe kokoa amin'ny vanim-potoana tany am-piandohana. Fa indray mandeha, tena zava-dehibe izany. Mandeha fiara mandeha amin'ny herinaratra izahay izao. Tena tontolo iainana. Izany no fananana. Ny refy hafa dia fampiononana tena lehibe indrindra eo amin'ny faritra izay misy ny seza eo aloha sy aoriana. Tena zava-dehibe izany. Tsy misy feo, tsy misy
Filoha Erdogan, Torkia ny Nampahatsiahy ny fomba fototra manan-danja ny siansa mba handroso hatrany amin'ny ara-teknika toy izany raharaha, dia avy eo:
Bilim Tamin'io andro io, dia notokanana ny foiben'ny fikarohana momba ny siansa, izay nanaovanay ny fampisehoana. Amin'izao fotoana siansa fototra ny oniversite any Torkia ny marina izahay. Androany, avy amin'ny Moyen Orient, University University, Yildiz University manana izany rehetra izany. Manana oniversite toy izany koa ny oniversite hafa. Fa izao no fotoana voalohany nahitanay fanovana. Tsy diesel na lasantsy izany. Misy mahasarika antsika ato. Fitsidihana amin'ny console eo anoloana. Miaraka amin'ny navigateur, 'aiza aho na handeha?' Tsy hoe. Avy any dia hiditra any ho any daholo ny rafitra sarintany. Taorian'ny rindrambaiko sy ny sisa dia tsy mila miteny hoe aiza aho. Tao daholo izay. Ny tandrefana no nikarakara azy. Izany no hataonay. Efa vita ny fotodrafitrasa ankehitriny
Erdogan, famantarana ny fiara, "tulip" no nanehoana azy.
Ny tenifototra Beşikdüzünün Teleferik dia efa voafaritra
Ny sarin'ny Akçaray dia nijanona teo amin'ny fiatoana amin'ny New Lines
Bursa Train Station Tetikasa High Speed ​​Train
Ny tetikasan'ny Railway Station Bursa dia nambara fa: Fiambenana ara-javakanto ankehitriny - NEWS PRIVATE
Famantaran'ny fiara an-trano